ဗဟုသုတ - ဘလော့များ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
All Blog Posts Tagged 'ဗဟုသုတ' (172)
နေလုံးကြီး ၀င်သွားတာနဲ့သြော်..တစ်နေ့ကုန်သွားပါပြီလားလို့ ညီးတွားကြတယ်၊တစ်နေ့တာဆိုတဲ့ အချိန်ကချမ်းသာဆင်းရဲ မရွေး၊ ယောက်ျားမိန်းမ မခွဲခြားလူနတ်တိရိစ္ဆာန်ဆိုပြီး ဘက်မလိုက်၊အားလုံးကို ညီမျှတဲ့ အချိန်တွေပေးပြီးရုတ်တရက် နှုတ်မဆက်ဘဲအားလုံးကို မျက်ကွယ်ပြုသွားပြီ။
ကာလရှည်လျားစွာ ကိုယ်နဲ့မကွဲ မကွာနေလာကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေရုတ်တရက် ခွဲခွါပြီး ကွဲကွာကြရရင်ဝန်းနည်းမှုတွေ ဖြစ်ကြတာဟာသံယောဇဉ်မကင်းတဲ့… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ May 20, 2013 8:00am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
နေမကောင်းဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီ ... (ရ)နှစ်လောက်ကြာလာပြီ အစာလည်းသိပ်စားမ၀င်ဘူး...ဆရာဝန်ပြတော့လည်း ရောဂါက မည်မည်ရရ ရှာမတွေ့ပဲ ဆန်ပြုတ်သောက်မှသက်သာတဲ့ဘ၀ရောက်ပြီး ဆန်ပြုတ်သောက်နေရတာ (၅)လလောက်ရှိလာပြီ...ရောဂါကထူးဆန်းတယ် ...မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အောင်ခြင်းရှဟ်ပါးသီချင်းဘွဲ့နားထောင်တဲ့အခါနဲ့ အင်္ဂုလိမာလသုတ်ရွတ်တဲ့အခါပဲသက်သာတာ....ရွှေမြို့တော်ဆိုဒ်မှာ စာဝင်ဖတ်လိုက်တာ ဒီဂါထာလေးတွေ့တာနဲ့ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ထင်လို့... ရွတ်ကြည့်လိုက်တာ တစ်ခေါက်ရွတ်ရုံနဲ့တင်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
သန္ဒာလင်း မှ May 16, 2013 10:22am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
သီလ သမာဓိ ပညာ သည် ပိဋကပ်သုံးပုံကို ကိုယ်စားပြုပေသည်။ ၀ိနည်း သုတ္တာန် အဘိဓ္မာ ဟု ဆိုပေသည်။ ဓမ္မခန္ဒာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်သည် သာသာနာတည်းဟူသော မြတ်စွာ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများကို ကိုယ်စားပြုပေသည်။၀ိနည်း စည်းကမ်းသည် လိုက်နာကျင့်သုံး ခြင်းနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးသည့်အခါ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အဆင့်အတန်းမရွေး တစ်တန်းတည်း
တူညီသော အကျိုးတရားကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိပေသည်။ ရှင်ဘုရင်နှင့် သူတောင်းစားကို တစ်တန်းတည်း
ဖြစ်အောင် သီလသည် ဘက်လိုက်မှု မရှိပေ။ သုတ္တာန်၏ အနှစ်သာရမှာ သတ္တ၀ါ၏ စရိုက်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို မှ May 16, 2013 9:18am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။ ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
ဦးဇင်း.. မန္တလေးကနေ ကျောက်ဆည်မြို့ကို အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် သွားရပါတယ်။ ထုံစံအတိုင်း လိုင်းကားစီးလို့ပေါ့။ ခေါင်းခန်းထဲမှာပဲ စီးနင်းလိုက်ပါသွားတာပါ။ ဘာသာခြားကားဆိုရင် မစီးဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်းက အဲဒီနေ့က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘာသာခြားရဲ့ ကားခေါင်းထဲမှာ စီးသွားရပါတယ်။
လမ်းရောက်တော့ ဒရိုင်ဘာရဲ့ အသိတစ်ယေက်ပါ ခေါင်းခန်းထဲ ၀င်လိုက်လာလို့ သုံးယောက်သား ခပ်ကျပ်ကျပ်နဲ့ပဲ ခရီးနင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အသိတွေဆိုတော့ စကားတပြောပြောနဲ့ပေါ့။ တစ်ချီမှာတော့ သူတို့က ဦးဇင်းဘက်ကို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ May 9, 2013 5:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ရိပ်သာ ရိပ်သာ ဆိုသည်မှာ ရိပ် = ရိပ်ဆိုသည်မှာ သစ်ရိပ် ၀ါးရိပ် အိမ်ရိပ် မိဘရိပ် လူရိပ် စသည်တို့ကို လိုပါသည်။ သာ = သာ ဆိုသည်မှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်သော အခါ တစ်ခုက တစ်ခုထက်
အရည်အချင်း အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားနေခြင်းမျိုးကို သာသည်ဟုခေါ်ပါသည်။
သာလွန်သည်ဟု ဆိုသည်မှာ အနည်းငယ်သာချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ များစွာ မြင့်မားပြီး စွမ်းဆောင်
ရည်ရော အရည်အချင်းရော အရည်အသွေးပါ သာနေခြင်းမျိုးကို လွန်ကဲစွာ ဖြစ်ပေါ်နေစေသော
ကြောင့် သာလွန်သည်ဟု သုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို မှ May 3, 2013 2:20pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။ အထူး နဲ့ အမှန်
အထူး နဲ့ အမှန် ဆိုသည်မှာ သမထနဲ့ ၀ိပသနာကို ကိုယ်စားပြုသော စကားလုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။
သမထသည် ထူးခြားသော စိတ်စွမ်းအင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အတွက်ကြောင့် ထူးခြားသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ကို ထူးခြားဆန်းကြယ်အောင် ကျင့်သုံးရပါသည်။ ၀ိပသနာသည် ထူးခြားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမဟုတ် လောကဓမ္မ အမှန်သဘောတို့အား ဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ကာ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးရပါသည်။
ထူးခြားလျှင် ဆန်းကြယ်သည် ဆန်းကြယ်လျှင် အနတ္တထက် အတ္တကို တိုးပွားစေနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ သာသနာတွင် နတ်များ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို မှ May 2, 2013 6:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဒကာတစ်ယောက်သည် မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်နဲ့လဲ သွေးသားတော်စပ်ပြီး လောကုတ္တရာ စာပေတွေကိုလဲ ထိပ်တန်းရောက်အောင် တတ်ထားသူဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း စာပေတော် အကျော်အမော် ဆရာတော်တွေကိုလဲ အထင်မကြီးဘဲ သာသနာတော်ကိုလဲ တစ်ဖက်က မယုံတယုံ ဖြစ်နေ၏။
စာပေဖက်မှာ မသိတာမရှိလောက်အောင် တတ်ကျွမ်းထားသူပီပီ သူ့ကိုယ်သူ အထင်ကြီးပြီး ရတနာသုံးပါးသော်မှ တကယ်မကြည်ညိုမလေးစားသော အသွင်ကို ဆောင်သွားပါသည်။
ဘုန်းကြီးဆိုတာ ငါလိုလူပဲ၊ ဘုရားဆိုတာ အုတ်ပုံပဲ၊ ရုပ်ပွားတော်ဆိုတာ ကျောက်ရုပ်ပဲ၊ တရားဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်လို သဘောရောက်နေပြီး… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ May 1, 2013 9:12pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း ဆရာဖြစ်သင်တန်းများ ကျင်းပမည်
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း
သင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတော်များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းတော်များ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကလေးဗဟိုပြုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရေးဆွဲထားသော
ဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များဖြင့် စနစ်ကျပြီး ရေရည်တည်တံ့မည့် ကျောင်းတော်များဖြစ်စေရန်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
dimplemit မှ April 19, 2013 5:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဒေါ်ဆိုင်ခမ်းတယောက် အလုပ်နှင့်လက် ပြတ်သည်ဟူ၍ မရှိပေ။ တနေကုန် အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်သည်။ သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှု လုပ်ရသည်ဆိုပေမယ့်လည်း ခင်ပွန်းသည်ကတော့ဖြင့် သူ့အတွက် အားကိုးအားထား မရနိုင်ခဲ့ပေ။ ကလေး ၅-ယောက်၏တာဝန်ကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရေးနဲ့ ပညာသင်စရိတ်ကအစ ဒေါ်ဆိုင်ခမ်းတယောက်တည်းသာလျှင် ကုန်းရုန်းရှာဖွေရသည်။
တနေ့ ဒေါ်ဆိုင်ခမ်းတယောက် မီးဖိုထဲ၌ ချက်ပြုတ်နေစဉ် တဖက်အိမ်မှ ခင်ပွန်းဦးစိုင်းလှမောင်၏ စကားပြောသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ထိုအိမ်မှ ညီအကိုလိုခင်ရသည့် ကိုမြတ်ခိုင်သည် တခြားရွာမှ အမျိုးသမီးနှင့်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ April 19, 2013 12:43pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
တရံရောအခါတွင် နတ်ပြည် ၆ ထပ်တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သော ဗြမ္မာမင်းကြီးသည် အကြံတစ်ခုရလေသည်.....။
ထိုအကြံကား သူနတ်ပြည်နှင့် ငရဲပြည်သွားလာရာတွ အခက်ခဲဖြစ်သောကြောင့်နတ်ပြည်-ငရဲပြည် အမြန်လမ်းမကြီး
ထို့ကြောင့် ဗြမ္မာမင်းကြီးလည်း နတ်မင်းကြီးနှင့် ငရဲမင်းကြီးတို့ကို နတ်သဘင် အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်လေသည်။
အစည်းအဝေးပြီးသောအခါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နတ်မင်းကြီးနှင့် ငရဲမင်းကြီးတို့ နတ်ပြည်-ငရဲပြည်အမြန်
လမ်းမကြီးကို တဝက်စီ(၅၀%) ဖောက်လုပ်ရန်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို မှ April 18, 2013 5:27pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
စိတ်သာ ပဓာန ဆိုပေမယ့်...
" အရက်ကို ရေ အဖြစ်နဲ့ စိတ်က ပြဌာန်းပြီး သောက်ရင်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ April 15, 2013 9:51am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဒီနှစ်သင်္ကြန် ၁၃.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ မှာသွားနေကျဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ၁၁.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ မှာ မွေးနေ့ အတွက် ရည်မှန်းပြီး
ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) မှ April 14, 2013 6:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
သူ့ နေရာနဲ့ သူ့ တန်ဖိုး (မာန်လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မိန့် ခွန်း)
မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်က အင်္ဂလိပ် အရေးပိုင်မင်းတစ်ယောက်ဟာ ၊
မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့အတွက် ၊ မာန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို လျှောက်ထားခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ဖောက်လုပ်မယ့် မီးရထားလမ်းဟာ ကျောင်းဝင်းနဲ့ မလွတ်တဲ့အတွက် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျောင်းတော်ကို ရွှေ့ပေးဖို့ ကိစ္စပါ ။
ဆရာတော်ကြီးက ရွှေ့မပေးနိုင်ကြောင်း မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာ
အရေးပိုင်မင်းက ၊ ဒီနိုင်ငံဟာ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွှေ့ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ....
အရှင်ဝဏ္ဏ မှ April 14, 2013 2:28am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ကံကိုချည်းပုံချတတ်သော အမှား ဖြူစင်သော အ၀တ်အစားများကို အစွန်းအထင်းများ စွန်းပေခဲ့သော် ဆေးများဖြင့် ဖျက်ကြရသည်။ သို့သော် ခဏခဏ
စွန်းပေပါများလာလျှင်(သို့)လက်နှီးစုတ်ဖြစ်သွား လျှင်ကား ဖျက်ဖို့ခဲရင်းသွားပါသည်။... ထို့အတူပင် အတွေးမှားအကြံ…
Ko Nge မှ April 7, 2013 11:30am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
"ဆရာတော်ဦးဗုဓ် ၏ ထူးခြားမှတ်သားဖွယ် သြ၀ါဒ ထူး(၈)ချက်"
"ဆရာတော်ဦးဗုဓ် ၏ ထူးခြား မှတ်သားဖွယ် သြ၀ါဒထူး(၈)ချက်"
"ဆရာတော်ဦးဗုဓ်"၏အကြောင်းအတော်များများသိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။ ရှေးရဟန်းပညာရှိ၊လူပညာရှိများက"ဗုဓ်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကိုညီညီတင် မှ April 2, 2013 3:32pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
(၁) အိန္ဒိယပြည်၊ ဘုံဘိုင်မြောက်ပိုင်း၊ နမ္မဒါမြစ်ထဲ၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ...။(၂) အိန္ဒိယပြည်၊ ဘုံဘိုင်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နမ္မဒါမြစ်အထက် သစ္စပန်တောင်ပေါ်၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ...။(၃) အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်း ဥဒယာနတိုင်း၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ...။(တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီး ဖာယီယန်၏ မှတ်တမ်းအရ)(၄) အိန္ဒိယပြည်၊ ပါတလိပုတ်မြို့တော်၏ တောင်ဘက်သုံးလိအကွာ၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ...။(ဖာယီယန်၏ မှတ်တမ်းအရ)(၅) သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (သီဟိုဠ်ကျွန်း) သုမနကုဋ(SriPada) တောင်ထိပ်၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ...။(၆) မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
zawhtet ဇော်ထက် မှ April 2, 2013 12:23am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မြတ်စွာဘုရားက ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုလိုက်နာ ကျင့်ကြံသူတွေဟာ ဂါရ၀၊ နိဝါတ မင်္ဂလာနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်၊
ကိုယ့်ထက် အသက်၊ ဂုဏ်ဝါ၊ ကြီးမြတ်သူကို အရိုအသေပြုခြခင်း၊ ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးလို့
ကြီးမြတ်ခြင်းဆိုရာမှာတော့ အသက်အားဖြင့် ကြီးခြင်းလည်း ရှိမယ်၊ ဂုဏ်အားဖြင့် ကြီးခြင်းလည်း ရှိမယ်၊
သီလ သိက္ခာအားဖြင့် ကြီးမြတ်ခြင်းလည်း ရှိမယ်ပေါ့၊ ဒီနေရာမှာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
whitecolor မှ April 1, 2013 7:18pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လူသားတိုင်း အတွက်ဖြစ်ပေမယ့်။ လူသားအားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။ (အိုင်စတိုင်းလ် - Albert Einstein)
(၄) အကယ်၍ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဖက်ပြိုင်သည့် ဘာသာရေးတစ်ခု ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
whitecolor မှ March 27, 2013 10:01am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
ဘုန်းဘုန်းတို့ မြန်မာပြည်မှာ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်လာပြီဆိုရင် မြို့လည်းမြို့အလျောက် တောလည်းတောအလျောက် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲတွေနဲ့ စည်ကားနေလေ့ ရှိပါတယ်။ ကားနဲ့တစ်မျိုး၊ ဆင်တွေမြင်းတွေနဲ့တစ်ဖုံ၊ လှည်းနဲ့တစ်လှည့်၊ လူနဲ့တစ်ထမ်း စီတန်းကာ လှည့်လည်လေ့ရှိကြတဲ့ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲမှာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
whitecolor မှ March 22, 2013 5:27pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
" ဗောဇ္ဈင်သုတ် ရွတ်ဖတ်တဲ.အခါ ဗောဇ္ဈင် ( ၇ ) ပါး ကို နားလည်အောင်လေ့လာပြီးမှ ရွတ်ဖတ်စေချင်ပါသည် " အပိုင်း ( ၂ )
ယခင်နေ.က အပိုင်း ( ၁ ) အနေနဲ. သတိသမ္ဗောဇ္ဈင် အကြောင်း တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။တင်ပြသည်ဆိုရာ ၌ အကျဉ်းမျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အကျယ် လေ့လာပါက ပို၍အကျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကျန်ရှိနေသော အပိုင်းများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
( ၂ ) ဓမ္မ၀ိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင် ဓမ္မ၀ိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင် ဆိုတာ ပညာပါပဲ ။ ပညာဆိုတာ အသိအမြင် ဥာဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ သတိ ဟာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) မှ March 6, 2013 6:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ —
မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။ ‹ Previous
အထူး နဲ့ အမှန်
အသက်သတ်သော ဘောဇဉ်ကိုစားသော်လည်း အပြစ်မရှိပုံ
2013May (225)April (268)March (369)February (306)January (300)2012December (220)November (228)October (305)September (215)August (192)July (197)June (154)May (183)April (202)March (267)February (301)January (357)2011December (389)November (278)October (174)September (314)August (350)July (342)June (235)May (191)April (61)March (144)February (5)1999November (42) ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺ မှ(ကြိုဆိုပါတယ်)
အ၇ိယမဂ္ဂင် ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
aungzawmyint ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything Htain Lin Oo liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဆရာတော် ပြပေးနေတဲ့ ၀ိပဿနာတရားရှုပွားသူ ဘယ်လောက်များများရှိပါသလဲ'6 minutes agomintun သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။13 minutes agoNwe Ni Aung leftacomment for dimplemit"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်"23 minutes agomintun postedablog postကျောက်ဆည်မြို့ ရွှေသာလျှောင်းတောင်တော် ငြိမ်းချမ်းရေးကျောင်းတိုက် ပြန်လွန်တော်မူပြီးသော ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓ ဟောကြာတော်မူသော တရားတော်များ …See More1 hour ago 0
ဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးမှမေးရက်ပေတယ်ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ် နောက်လူတွေသိ၇တာပေါ့ ကျနော်လဲနောက်လူပဲ"1 hour agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဘယ်သူကပိုမိုဆိုးသလဲ'"ကျေးဇူးပါအကို ခေါင်းစဉ်လေးဆွေးနွေးချင်တယ် ဒိ၂ခုကြောင့်လဲဘာသားခြားတွေးတိုခိုက်တာခံနေရသလို…"1 hour agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဆရာတော် ပြပေးနေတဲ့ ၀ိပဿနာတရားရှုပွားသူ ဘယ်လောက်များများရှိပါသလဲ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို"1 hour agoဖိုးကံထူး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'"ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲအကို ဖတ်လိုက်၇တာရင်ထဲယုံကြည်ချက်တော့ရှိလာတယ်"1 hour agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲ'"တယ် တန်ဖိုးရှိလှပါလားဘု၇ား အလုပ်သမားသတ်သတ်သာ"1 hour agothatnaing, မြတ်ကိုကိုဟန် and thetnaungmawgyun joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺2 hours agoဖိုးကံထူး commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မနေသူတွေထဲမှာ နေပါ..'"တင်ပါ့ဘုရား မလွတ်သေးပါဘူးဘုရား"2 hours agoဖိုးကံထူး commented on thein wai's blog post '“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။'"သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဘုရား"2 hours ago More... RSS